Somalia oo xiriir diblomaasiyadeed la yagleeshay dal kale oo Turkic ah oo aysan abid xiriir ula yeelan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo xiriir diblomaasiyadeed la yagleeshay dal kale oo Turkic ah oo...
Somalia oo xiriir diblomaasiyadeed la yagleeshay dal kale oo Turkic ah oo aysan abid xiriir ula yeelan
(Baku) 12 Juun 2021 – DF Somalia ayaa xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay isla markaana Safaarad rasmi ah ka furatay caasimadda dalka Azerbaijan ee Baku, halkaasoo warqadda aqoonsiga laga qabtay Danjiraha Somalia.
Ujeedka Somalia waa in xiriir cusub oo diblomaasiyadeed oo keena xiriirro dhinacyo kala duwan ah iyadoo aanu abid xiriir rasmi ihi horay u dhexsan labadan dal, maadaama ay Azerbaijan horay uga tirsanayd Jamhuuriyadihii ku midaysnaa Midowgii Soofiyeeti ee bur burburay.
“Azerbaijan waxa ay xoogga saareysaa xoojinta xiriir saaxiibtinnimo ku dhisan oo ay la yeelato Somalia” ayuu yiri Wasiir Bayramov oo hadlayey.
Dalka Azerbaijan ayaa ka mid ah dalalka sida aadka ugu dhow Jamhuuriyadda Turkiga oo ah hoggaanka ruuxiga ah ee qoowmiyaadka Turkic-ga ah oo ay sidoo kale ka mid yihiin Uzbekstan, Kazakhstan, Turkmenstan, Kyrgyztan iyo dadka Uyghuri-ga oo haatan hoos taga dalka Shiinaha. Waxay sidoo kale deggan yihiin Ruushka, Iiraan iyo dalal kale.
Previous article”Huawei cayriya marka hore!” – Imaaraadka oo looga baxay ballantii keentay inay Israel la heshiiyaan (Tibxo cusub)
Next article”Maxaan Somalia ugu dhalan waayey!” – Dadka reer Yaman oo faafinaya sawirro qurxoon oo Somalia ku saabsan (Arag fal-celinta)